Dhukaasi Teeksaas lafa kadhannaatti banameen yoo xiqqaate namoota 26 galaafate - BBC News Afaan Oromoo
Madda suuraa, Erich Schlegel
Hidhataan qawwee haaleellaa Teeksaas lafa kadhannaa tajaajila Dilbataatti irratti baneen yoo xiqqaate lubbuun namoota 26 darbuu isaa qondaaltonni beeksisan.
Haleellaan kun kan raawwate bakka kadhannaa 'First Baptist Church' magaalaa xiqqoo Suuzerland Ispriingisitti, Naannoo Wiilsan, Teeksaas argamtutti dha.
Namichi hidhataan dhukaasa sana booda ajjeefameera jedhame kun, mana kadhannaa sanatti seenuun dhukaasa kan bane akka lakkoofsa naannootti guyyaa sa'aatii 11:30 (akka lakkoofsa Itoophiyaa halkan 2:30) irratti dha.
Lakkoofsa namoota lubbuun darbanii kan ifoomsan Bulchaan Teeksaas Gireeg Abboot, seenaa Teeksaas keessatti kun haleellaa isa guddaa dha jedhaniiru.
''Kun namoota miidhamaniif gadda dheeraa itti ta'a,'' jedhani ibsa Dilbatarratti kennaniin.
Madda suuraa, LAURA BUCKMAN
Poolisoonni nama shakkame sana konkolaataa isaa keessatti du'ee argani
Namoonni lubbuu isaanii dhaban umurii waggaa 5-72 gidduu akka jiran Daayirektarri Kutaa Nageenya Hawaasummaa Naannawa Teeksaas, Firiimaan Maartiin ibsaniiru. Yoo xiqqaate namoonni 20'ni miidhamanii gara hoospitaalaatti akka geeffamanis qondaaltonni himaniiru.
Mr. Maartiin shakkamaa kun dargaggeessa adii umurii 20'ta keessa jiru fi uffannaa gurraachaan kan haguuggate akkasumas 'balestic vest' rasaasa dhorku kaawwatee ture. Meeshaa 'Assault-style rifle' jedhamu hidhatee akka tures ibsaniiru.
Mana kadhannaa sanatti seenee dhukaasa banuun dura bakkeedhaa akka jalqabe, Mr Maartiin himaniiru.
Lammiin naannoo tokko osoo shakkamaan sun iddoo sanaa konkolaataadhaan hin baqatin dura ''qawweesaa fudhatee itti dhukaasuu eegale''.
Lammiin sunis shakkamaa karaarraa maqee konkolaataasaa wayiin walitti buuse sana duuka bu'ee. Poolisiin shakkamaa kana konkolaataasaa keessatti du'ee argus, dhukaasa jiraataa naannoo sanaan yookaan ofiin akka of ajjeese akka adda hin baane Mr Maartiin dabalanii himu.